परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: जीवनमा प्रवेश | अंश ५२५ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरले मानिसलाई सजाय र न्याय गर्नुहुन्छ किनभने यो उहाँको कार्यको लागि आवश्यक छ र यति मात्र होइन, मानिसलाई पनि यसको आवश्यक छ। मानिसलाई सजाय र न्याय गरिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै उसले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने क्षमता हासिल गर्न सक्छ। आज तिमीहरू पूर्ण रूपमा विश्‍वस्त भएका छौ, तर जब तिमीहरूले अलिकति बाधाको सामना गर्छौ, तिमीहरूलाई समस्या हुन्छ; तिमीहरूको कद अझै पनि अत्यन्तै सानो छ र गहन ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि तिमीहरूले अझै त्यस किसिमको सजाय र न्यायको अनुभव गर्नुपर्छ। आज परमेश्‍वरप्रति तिमीहरूसँग केही श्रद्धा छ र तिमीहरूले परमेश्‍वरको भय मान्छौ र उहाँ नै साँचो परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भन्‍ने तिमीहरूलाई थाहा छ तर तिमीहरूसँग उहाँप्रतिको महान् प्रेम छैन, तिमीहरूले शुद्ध प्रेम प्राप्त गरिसकेको हुने त कुरै नगरौँ; तिमीहरूको ज्ञान अत्यन्तै सतही छ र तिमीहरूको कद अझै अपर्याप्त छ। साँचो रूपमा एउटा वातावरणको सामना गर्दा तैँले त्यसमा अझै साक्षी दिएको छैनस्, तेरो प्रवेश अत्यन्तै थोरै मात्र सक्रिय छ र कसरी अभ्यास गर्ने सो तँलाई केही पनि थाहा छैन। धेरैजसो मानिसहरू निष्क्रिय र सुस्त छन्; तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई आफ्‍नो हृदयमा गोप्य रूपमा मात्र प्रेम गर्छन् तर तिनीहरूमा अभ्यास गर्ने कुनै उपाय छैन, न त आफ्‍ना उद्देश्यहरू के हुन् भन्‍ने विषयमा नै तिनीहरू स्पष्ट छन्। सिद्ध पारिएकाहरूमा सामान्य मानवता मात्र नभई विवेकको हदभन्दा माथिका सत्यताहरू पनि हुन्छ, र ती सत्यता विवेकका मापदण्डहरूभन्दा माथि हुन्छन्; तिनीहरूले परमेश्‍वरको प्रेमको ऋण तिर्न विवेकको प्रयोग त गर्छन् नै, तर त्योभन्दा पनि बढी, तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई चिनेका छन्, र परमेश्‍वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, मानिसको प्रेमको योग्य हुनुहुन्छ र परमेश्‍वरमा प्रेम गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् भन्‍ने कुरा देखेका छन्; मानिसले उहाँलाई प्रेम नगरीकन बस्‍न सक्दैन! सिद्ध पारिएकाहरूको परमेश्‍वरप्रतिको प्रेम तिनीहरूका आफ्‍नै आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्नको लागि हो। तिनीहरूको प्रेम स्वस्फूर्त प्रेम हो र त्यो प्रेमले सट्टामा केही पनि माग्दैन र त्यो कुनै कारोबार होइन। अरू केही कारणले नभई उहाँप्रतिको तिनीहरूको ज्ञानको कारणले मात्रै तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छन्। परमेश्‍वरले आफूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्‍न भन्‍ने कुरालाई त्यस्ता मानिसहरूले वास्ता गर्दैनन् र परमेश्‍वरलाई सन्तुष्टि दिनेबाहेक अरू केही कुराद्वारा तिनीहरू सन्तुष्ट हुँदैनन्। तिनीहरूले परमेश्‍वरसँग मोलतोल गर्दैनन्, न त परमेश्‍वरप्रतिको आफ्‍नो प्रेमलाई नै तिनीहरूले विवेकको आधारमा मापन गर्छन्: “तपाईंले मलाई दिनुभएको छ, त्यसैले यसको सट्टामा म तपाईंलाई प्रेम गर्छु; यदि तपाईंले मलाई दिनुहुन्‍न भने, यसको सट्टामा मसँग तपाईंलाई दिन केही पनि हुँदैन।” सिद्ध पारिएकाहरूले सधैँ नै यस्तो विश्‍वास गर्छन्: “परमेश्‍वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले हामीमा आफ्‍नो काम गर्नुहुन्छ। सिद्ध पारिनको लागि मसँग यो मौका, अवस्था र योग्यता भएको हुनाले, मेरो उद्देश्य अर्थपूर्ण जीवन जिउने हुनुपर्छ र मैले उहाँलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ।” यो पत्रुसले अनुभव गरेको जस्तै छ: आफू सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा हुँदा, उनले परमेश्‍वरसँग यसो भन्दै प्रार्थना गरे, “हे परमेश्‍वर! तपाईंलाई थाहा छ, समय वा स्थान जे-जस्तो भए पनि, म तपाईंलाई सधैँ सम्‍झन्छु। तपाईंलाई थाहा छ, समय वा स्थान जे-जस्तो भए पनि, म तपाईंलाई प्रेम गर्न चाहन्छु, तर मेरो कद निकै सानो छ, म निकै कमजोर र शक्तिहीन छु, मेरो प्रेम अत्यन्तै सीमित छ र तपाईंप्रतिको मेरो इमानदारिता अत्यन्तै थोरै छ। तपाईंको प्रेमको तुलनामा, म जिउनसमेत योग्य छैनँ। मेरो जीवन व्यर्थ नहोस्, र मैले तपाईंको प्रेमको ऋण तिर्न मात्र होइन, मसँग भएका सबै कुरा तपाईंमा समर्पित गर्न सकूँ भन्‍ने मात्र मेरो कामना छ। यदि मैले तपाईंलाई सन्तुष्ट पार्न सकेँ भने, एक प्राणीको रूपमा मैले मनमा शान्ति पाउनेछु र अरू केही पनि माग्‍नेछैनँ। अहिले म कमजोर र शक्तिहीन भए पनि, म तपाईंका अर्तीहरूलाई बिर्सनेछैनँ, र म तपाईंको प्रेमलाई बिर्सनेछैनँ। अहिले मैले तपाईंको प्रेमको ऋण तिर्नेबाहेक अरू केही पनि गरिरहेको छैन। हे परमेश्‍वर, मलाई अति नराम्रो लाग्छ! म मेरो हृदयमा भएको प्रेम तपाईंलाई कसरी दिन सक्छु, मैले गर्न सक्‍ने जति सबै कसरी गर्न सक्छु, कसरी तपाईंका इच्‍छाहरूलाई पूरा गर्न सक्छु र कसरी मसँग भएका सबै कुरा तपाईंलाई अर्पण गर्न सक्छु? मानिसको कमजोरी तपाईंलाई थाहा छ; तपाईंको प्रेमको लागि म कसरी योग्य बन्‍न सक्छु? हे परमेश्‍वर! तपाईंलाई थाहा छ, म सानो कदको छु, मेरो प्रेम अत्यन्तै थोरै छ। यस किसिमको वातावरणमा मैले कसरी सक्दो गर्न सक्छु? मलाई थाहा छ मैले तपाईंको प्रेमको ऋण तिर्नुपर्छ, मलाई थाहा छ मसँग भएका सबै कुरा मैले तपाईंलाई दिनुपर्छ, तर आज मेरो कद अत्यन्तै सानो छ। म बिन्ती गर्छु मलाई शक्ति र आत्मबल दिनुहोस्, ताकि तपाईंमा समर्पण गर्नको लागि मैले अझै बढी शुद्ध प्रेम प्राप्त गर्न सकूँ र मसँग भएका सबै कुरालाई अझै बढी तपाईंमा समर्पण गर्न सकूँ; म तपाईंको प्रेमको ऋण तिर्न मात्रै होइन, तपाईंको सजाय, न्याय र परीक्षाहरू अनि अझ गम्‍भीर श्रापहरूलाई समेत अझै बढी अनुभव गर्न सकूँ। तपाईंले मलाई तपाईंको प्रेम हेर्न दिनुभएको छ र तपाईंलाई प्रेम नगरी बस्‍न म असक्षम छु, र म आज कमजोर र शक्तिहीन भए पनि, म तपाईंलाई कसरी बिर्सन सक्थेँ र? तपाईंको प्रेम, सजाय र न्याय सबैले मलाई तपाईंलाई चिन्‍ने तुल्याएको छ, तैपनि तपाईंको प्रेमलाई पूरा गर्न म असक्षम छु जस्तो लाग्छ, किनभने तपाईं अत्यन्तै महान् हुनुहुन्छ। मसँग भएका सबै कुरा कसरी मैले सृष्टिकर्तामा समर्पण गर्न सक्छु?” पत्रुसको अनुरोध यस्तै थियो, तैपनि उनको कद अत्यन्तै अपर्याप्त थियो। यस क्षणमा, उनले यस्तो महसुस गरे मानौं उनको हृदयमा छुरी चलाइएको छ। उनी वेदनामा थिए; यस्तो अवस्थामा के गर्ने हो उनलाई केही थाहा थिएन। तैपनि उनले प्रार्थनालाई जारी नै राखे: “हे परमेश्‍वर! मानिसको कद बालकको जस्तो छ, उसको विवेक दुर्बल छ, र मैले पूरा गर्न सक्‍ने एउटै मात्र कुरा तपाईंको प्रेमको ऋण तिर्नु हो। आज तपाईंका इच्‍छाहरूलाई कसरी सन्तुष्ट पार्ने हो, मलाई थाहा छैन र म आफूले गर्न सक्‍ने सबै कुरा गर्न, मसँग भएका सबै कुरा दिन र मेरा सबै कुरा तपाईंमा समर्पित गर्न चाहन्छु। तपाईंको न्याय र तपाईंको सजाय जे-जस्तो भए पनि, तपाईंले मलाई जेसुकै दिनुभए पनि, तपाईंले मबाट जेसुकै लिनुभए पनि, तपाईंप्रतिको सानोभन्दा सानो गुनासोबाट समेत मलाई मुक्त गर्नुहोस्। तपाईंले मलाई सजाय र न्याय गर्नुहुँदा धेरैपटक मैले आफैसँग गनगन गरेँ, र शुद्धता प्राप्त गर्न वा तपाईंका इच्‍छाहरू पूरा गर्न म असक्षम रहेँ। मैले तपाईंको प्रेमको ऋण तिर्ने कार्य बाध्यताद्वारा पैदा भएको थियो र यो क्षणमा म आफैलाई अझै बढी घृणा गर्छु।” परमेश्‍वरको अझ शुद्ध प्रेमको खोजी गरेको कारण पत्रुसले यसरी प्रार्थना गरे। उनले खोजी र बिन्ती गरिरहेका थिए, र यसअलावा, उनले आफैलाई दोषी ठहराइरहेका र परमेश्‍वरसँग आफ्‍नो पाप स्विकारिरहेका थिए। उनलाई आफू परमेश्‍वरप्रति ऋणी भएको महसुस भयो र आफैप्रति घृणा लाग्यो, तैपनि केही हिसाबले उनी दुःखित र निष्क्रिय पनि थिए। उनी परमेश्‍वरका इच्छाहरू पूरा गर्न पर्याप्त नभएझैँ र आफ्नो सक्दो गर्न असक्षम भएझैँ, उनले सधैँ यस्तै महसुस गर्थे। त्यस्ता अवस्थाहरूमा पनि पत्रुसले अय्यूबको जस्तो विश्‍वास अनुसरण गरे। अय्यूबको विश्‍वास कति महान् थियो भन्‍ने कुरा उनले देखेका थिए, किनभने अय्यूबले आफूसँग भएका सबै थोक परमेश्‍वरले दिनुभएको हो र आफूबाट सबै कुरा परमेश्‍वरले लानु स्वभाविकै हो, परमेश्‍वरले जसलाई चाहनुहुन्छ त्यसलाई दिनुहुन्छ अर्थात् परमेश्‍वरको धर्मी स्वभाव त्यस्तो छ भन्‍ने कुरा बुझेका थिए। अय्यूबसँग कुनै गुनासो थिएन र उनले अझै पनि परमेश्‍वरको प्रशंसा गर्न सक्थे। पत्रुसले पनि आफैलाई चिनेका थिए र आफ्‍नो हृदयमा उनले यसो भन्दै प्रार्थना गरे, “आज, मैले मेरो विवेकको प्रयोग गरेर तपाईंको प्रेमको ऋण तिरे पनि र तपाईंलाई जति नै धेरै प्रेम फिर्ता दिए पनि, त्यसमा मात्रै म सन्तुष्ट हुनु हुँदैन, किनभने मेरा विचारहरू अत्यन्तै भ्रष्ट छन् र तपाईंलाई सृष्टिकर्ताको रूपमा हेर्न म असक्षम छु। तपाईंलाई प्रेम गर्नको निम्ति म अझै पनि अयोग्य भएको हुनाले, मैले मसँग भएका सबै कुरा तपाईंलाई समर्पण गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ, जुन म स्वेच्छाले गर्नेछु। तपाईंले गर्नुभएका सबै कुरा मैले जान्‍नैपर्छ, र मसँग कुनै विकल्‍प छैन र मैले तपाईंको प्रेमलाई हेर्नैपर्छ, र तपाईंको प्रशंसा गर्नैपर्छ र तपाईंको पवित्र नाउँको बढाइ गर्नैपर्छ, ताकि तपाईंले मबाट महान् महिमा प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईंप्रतिको यो साक्षीमा म दह्रिलो गरी खडा हुन तत्पर छु। हे परमेश्‍वर! तपाईंको प्रेम कति बहुमूल्य र सुन्दर छ; म कसरी दुष्टको हातमा जिउने इच्‍छा गर्न सक्छु र? के मलाई तपाईंले बनाउनुभएको होइन र? म कसरी शैतानको राज्यक्षेत्रमा जिउन सक्छु? म मेरो सम्पूर्ण अस्तित्व नै तपाईंको सजायमा जिओस् भन्‍ने चाहन्छु। दुष्टको राज्यक्षेत्रमा जिउन मलाई मन छैन। यदि म शुद्ध पारिन र मसँग भएका सबै कुरा तपाईंमा समर्पण गर्न सक्छु भने, म मेरो शरीर र मन तपाईंको न्याय र सजायमा समर्पित गर्न तत्पर छु, किनभने म शैतानलाई घृणा गर्छु र त्यसको राज्यक्षेत्रमा जिउन चाहन्‍नँ। तपाईंले मलाई गर्नुहुने न्यायमार्फत आफ्‍नो धर्मी स्वभाव देखाउनुहुन्छ; म खुशी छु र मसँग अलिकति पनि गुनासो छैन। यदि मैले एउटा प्राणीको कर्तव्य पूरा गर्न सकेँ भने, म मेरो सम्पूर्ण जीवनमा तपाईंको न्यायको साथ होस् भन्‍ने चाहन्छु, जसमार्फत म तपाईंको धर्मी स्वभावलाई चिन्‍नेछु र दुष्टको प्रभावबाट आफैलाई मुक्त गर्नेछु।” पत्रुसले सधैँ यसरी प्रार्थना गर्थे, सधैँ यसरी खोजी गर्थे र तुलनात्मक रूपमा भन्दा उनी उच्‍च क्षेत्रमा पुगे। उनले परमेश्‍वरको प्रेमको ऋण तिर्न त सके नै तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, एक प्राणीको रूपमा आफ्‍नो कर्तव्य पनि पूरा गरे। उनलाई आफ्नो विवेकले दोष मात्रै दिएन, उनले त विवेकका मापदण्डहरू पार गर्न पनि सके। उनका प्रार्थनाहरू निरन्तर माथि परमेश्‍वरकहाँ गए, जसले गर्दा उनका आकांक्षाहरू सधैँ उच्‍च रहे र परमेश्‍वरप्रतिको उनको प्रेम सधैँ महान् रह्यो। वेदनापूर्ण पीडा सहेर पनि, उनले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न भुलेनन्, बरु परमेश्‍वरको इच्‍छा बुझ्ने क्षमता प्राप्त गर्ने प्रयास गरे। आफ्ना प्रार्थनाहरूमा उनले निम्‍न शब्‍दहरू उच्‍चारण गरे: “तपाईंको प्रेमको ऋण तिर्नेबाहेक मैले अरू केही हासिल गरेको छैन। मैले शैतानको अघि तपाईंको साक्षी दिएको छैनँ, आफूलाई शैतानको प्रभावबाट मुक्त गरेको छैनँ र म अझै पनि देहमा जिउँछु। म शैतानलाई हराउन र यसलाई लज्‍जित पार्नको लागि मेरो प्रेम प्रयोग गर्न र यसरी तपाईंको इच्‍छा पूरा गर्न चाहन्छु। म मेरो सम्पूर्णता तपाईंलाई दिन चाहन्छु, आफ्नो थोरै अंश पनि शैतानलाई दिन चाहन्‍नँ, किनभने शैतान तपाईंको शत्रु हो।” उनले यो दिशामा जति खोजी गरे, त्यति नै प्रभावित भए र यी विषयहरूमा तिनको ज्ञान त्यति नै उच्‍च भयो। थाहै नभई उनले आफूलाई शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ र पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरतर्फ फर्कनुपर्छ भनी जानिसकेका थिए। उनले प्राप्त गरेको क्षेत्र यस्तो थियो। उनले शैतानको प्रभावलाई नाघ्दै थिए र देहको सुख र आनन्दहरूबाट आफैलाई मुक्त गर्दै थिए, र परमेश्‍वरको सजाय र उहाँको न्याय दुवैलाई अझै गहन रूपमा अनुभव गर्न इच्‍छुक हुँदै थिए। उनी भन्थे, “म तपाईंको सजायमाझ जिए पनि र तपाईंको न्यायमाझ जिए पनि, त्यसबाट आइपर्ने कठिनाइको बाबजुत पनि, म शैतानको राज्यक्षेत्रमा जिउन अनिच्‍छुक छु, शैतानको छल भोग्‍न अनिच्‍छुक छु। म तपाईंका श्रापहरूमा जिउन आनन्द मान्छु तर शैतानका आशिष्‌हरूमा जिउँदा पीडित हुन्‍छु। तपाईंको न्यायमा जिएर म तपाईंलाई प्रेम गर्छु र यसले मलाई निकै ठूलो आनन्द दिन्छ। तपाईंका सजाय र न्याय धर्मी र पवित्र छन्; यो मलाई शुद्ध पार्नको लागि हो र त्योभन्दा पनि बढी, यो मलाई मुक्ति दिनको लागि हो। म मेरो सम्पूर्ण जीवन तपाईंको न्यायमा बिताउन चाहन्छु ताकि म तपाईंको हेरचाहमै रहन सकूँ। म एक क्षण पनि शैतानको राज्यक्षेत्रमा जिउन चाहन्‍नँ; म तपाईंबाट शुद्ध पारिन चाहन्छु; कष्ट नै भोग्‍नु परे पनि, म शैतानद्वारा शोषित हुन र त्यसको छलमा पर्न चाहन्‍नँ। म अर्थात् यस प्राणीलाई तपाईंद्वारा प्रयोग गरिनुपर्छ, तपाईंद्वारा स्वामित्वमा राखिनुपर्छ, तपाईंद्वारा न्याय गरिनुपर्छ, र तपाईंद्वारा सजाय दिइनुपर्छ। म तपाईंद्वारा श्रापित समेत हुनुपर्छ। तपाईं मलाई आशिष दिन इच्‍छुक हुनुहुँदा मेरो हृदय आनन्दित हुन्छ, किनभने मैले तपाईंको प्रेम देखेको छु। तपाईं सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र म एक प्राणी हुँ: तपाईंलाई धोका दिएर म शैतानको राज्यक्षेत्रमा जिउनु हुँदैन, न त म शैतानद्वारा शोषित हुनु नै हुन्छ। शैतानको लागि जिउनुभन्दा त म तपाईंको घोडा वा गोरु हुनुपरोस्। बरु म कुनै पनि शारीरिक आनन्दविना नै तपाईंको सजाय सहेर बस्छु र मैले तपाईंको अनुग्रह गुमाउनु परे पनि यसले मलाई आनन्द नै दिन्छ। तपाईंको अनुग्रह मसँग नभए पनि, तपाईंको सजाय र न्यायमा म आनन्द लिन्छु; तपाईंको सर्वोत्तम आशिष, तपाईंको महान् अनुग्रह यही हो। मप्रति तपाईं सधैँ प्रतापी र क्रोधित हुनुभए पनि, म तपाईंलाई छोड्न असमर्थ छु र तपाईंलाई पर्याप्त प्रेम गर्न सक्दिनँ। म तपाईंको घरमा बस्‍न रुचाउँछु, म तपाईंबाट श्राप, सजाय र प्रहार पाउन चाहन्छु, तर म शैतानको राज्यक्षेत्रमा जिउन इच्‍छुक छैनँ, न त म देहको लागि मात्रै दौडधूप गर्न र व्यस्त हुन नै इच्‍छुक छु, देहको लागि जिउन इच्छुक हुने त कुरै नगरौँ।” पत्रुसको प्रेम शुद्ध प्रेम थियो। यो नै सिद्ध पारिनुको अनुभव र सिद्ध पारिनुको सबैभन्दा उच्‍च क्षेत्र हो; योभन्दा अर्थपूर्ण जीवन अरू छैन। उनले परमेश्‍वरको सजाय र न्याय स्वीकार गरे र परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावलाई बहुमूल्य ठाने र पत्रुसको बारेमा भन्दा उनीसँग योभन्दा मूल्यवान अरू केही थिएन। उनी भन्थे, “शैतानले मलाई भौतिक आनन्दहरू दिन्छ, तर म तिनलाई बहुमूल्य ठान्दिनँ। ममाथि परमेश्‍वरको सजाय र न्याय आउँछ—यसमा मैले अनुग्रह पाउँछु, यसमा मलाई आनन्द मिल्छ र यसमा म आशिषित हुन्‍छु। परमेश्‍वरको न्याय नभएको भए, मैले परमेश्‍वरलाई कहिल्यै प्रेम गर्ने थिइनँ, म अझै पनि शैतानको राज्यक्षेत्रमा हुन्थेँ, अझै यसकै नियन्त्रण र यसकै आज्ञामा हुन्थेँ। त्यस्तो भएको भए, म कहिल्यै वास्तविक मानव बन्दिनथेँ, किनभने परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट तुल्याउन म असक्षम हुन्थेँ र मेरो सम्पूर्णता परमेश्‍वरलाई समर्पित गर्दिनथेँ। मभित्र आगो नै बलिरहेको जस्तो गरी मलाई भित्र कहिँकतै आराम नदिई र मलाई शान्ति वा आनन्दरहित तुल्याई, परमेश्‍वरले मलाई आशिष नदिनुभए पनि र परमेश्‍वरको सजाय र अनुशासन मबाट कहिल्यै टाढा नगए पनि, परमेश्‍वरको सजाय र न्यायमा म उहाँको धर्मी स्वभाव देख्‍न सक्षम छु। म यसमा आनन्दित हुन्छु; जीवनमा योभन्दा बढी बहुमूल्य वा अर्थपूर्ण कुरा केही पनि छैन। उहाँको सुरक्षा र हेरचाह निर्दयी सजाय, न्याय, श्राप र प्रहार बनेको भए पनि, म यी कुराहरूमा आनन्द लिन्छु, किनभने यी कुराहरूले मलाई अझै राम्ररी शुद्ध पार्न र परिवर्तन गर्न सक्‍छन्, मलाई परमेश्‍वरको नजिक ल्याउन सक्छन्, परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न मलाई अझै सक्षम तुल्याउन सक्छन्, र परमेश्‍वरप्रतिको मेरो प्रेमलाई अझै शुद्ध बनाउन सक्छन्। यसले मलाई एक प्राणीको रूपमा मेरो कर्तव्य पूरा गर्न सक्षम तुल्याउँछ र मलाई परमेश्‍वरको सामु र शैतानको प्रभावबाट टाढा लैजान्छ, ताकि मैले अबउप्रान्त शैतानको सेवा गर्नु नपरोस्। जब म शैतानको राज्यक्षेत्रमा जिउँदिनँ र कुनै पनि कुरा बाँकी नराखी मसँग भएका सबै कुरा र मैले गर्न सक्‍ने सबै कुरा परमेश्‍वरलाई समर्पण गर्न सक्छु—त्यो नै म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने क्षण हुनेछ। मलाई मुक्ति दिने परमेश्‍वरको सजाय र न्याय नै हो र मेरो जीवनलाई परमेश्‍वरको सजाय र न्यायबाट अलग गर्न सकिँदैन। पृथ्वीको मेरो जीवन शैतानको राज्यक्षेत्रमा रहेको छ र परमेश्‍वरको सजाय र न्यायको वास्ता र सुरक्षा नभएको भए, म सधैँ शैतानको राज्यक्षेत्रमा जिउनेथेँ, र यति मात्र होइन, मैले अर्थपूर्ण जीवन जिउने मौका वा माध्यमहरू पाउँदिनथेँ। परमेश्‍वरको सजाय र न्यायले मलाई कहिल्यै छोडेन भने मात्रै परमेश्‍वरद्वारा म शुद्ध पारिन सक्षम हुनेछु। परमेश्‍वरको कठोर वचन र धर्मी स्वभाव अनि परमेश्‍वरको प्रतापी न्यायद्वारा मात्रै, मैले सर्वोच्‍च सुरक्षा पाएको छु र म ज्योतिमा जिएको छु, र मैले परमेश्‍वरका आशिष्‌हरू प्राप्त गरेको छु। शुद्ध पारिन, शैतानबाट आफूलाई मुक्त गर्न र परमेश्‍वरको प्रभुत्वमा जिउन सक्षम हुनु—आज यो नै मेरो जीवनको सबैभन्दा महान् आशिष हो।” पत्रुसले अनुभव गरेको सबैभन्दा उच्‍च क्षेत्र यही हो।
के येशूको “परमेश्‍वर हामीसँग” भन्ने नाउँले परमेश्‍वरको स्वभावलाई पूर्णरूपमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ? के त्यसले पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरलाई...
मानिसहरूले ममा विश्‍वास गर्छन्, तर तिनीहरू मेरो निम्ति गवाही दिन असक्षम छन्, न त मैले आफैलाई प्रकट गर्न अघि तिनीहरूले मेरो निम्ति गवाही...